Yaanu Nahay | Lasoco | Dhexdhexaadinta Bulshada Minnesota | 1-833-266-2663
Ururadayada xubnaha ka ah waxay leeyihiin shaqaale khabiiro ah iyo tabaruceyaal tababaran oo faragelin kara arrimaha ugu kulul iyo madaxda ugu fiican. Si wadajir ah, waxaan u adeegnaa tobanaan kun oo qof oo gobolka oo dhan ah sanad walba. Intaa waxaa dheer, lammaane kasta waxa ay shahaado siisay Maxkamadda Sare ee Minnesota in ay muujiyeen sida ay uga go'an tahay qawaaniinta gobolka iyo habraaca hawlgelinta. Si wada jir ah, waxaanu wax ka bedel ku samaynaa nolosha asxaabtaada, deriskaaga, iyo asxaabtaada, ardayda aad isku fasalka tihiin. Dhawaan, waxaan rajeyneynaa inaan isbedel ku sameyno noloshaada.
Ururada Xubnaha Dhexdhexaadinta Bulshada
Hawlgalka: In la horumariyo awoodda bulshada si ay si xushmad leh u xalliso khilaafka iyo hagaajinta waxyeelada.
Dhexdhexaadinta Bulshada & Adeegyada Soo celinta, Inc. Qorista iyo tababbarka dhexdhexaadiyeyaasha iskaa wax u qabso ah si ay u noqdaan fududeeyayaal dhexdhexaad ah, CMRS waxay ka shaqeysaa sidii loo kobcin lahaa hal-abuurnimo iyo abuurista fursad colaadeed iyada oo loo marayo dhexdhexaadinta bulshada, dhexdhexaadinta carruurta, dhexdhexaadinta ku salaysan maxkamad, iyo tababarrada caddaaladda iyo dhexdhexaadinta soo celinta. CMRS waa urur aan faa'iido doon ahayn oo u adeega Degmada Hennepin oo ay maalgeliso taageero dadweyne iyo mid gaar ahaaneedba. Shaqada CMRS iyo mutadawiciinteeda iyo la-hawlgalayaasheeda waxay gacan ka geystaan ​​abuurista xaafado iyo bulshooyin ammaan ah oo is-waafaqsan.
Hawlgalka: In dadka la isu keeno si loo helo xal waara oo wax ku ool ah oo colaadaha.
Himilada CRC waa in ay noqoto isha aasaasiga ah ee bulshada si ay fursad uga abuurto isku dhac, iyo halka hagaajinta waxyeelada lagu qiimeeyo ciqaabta.
Adeegyada CRC waxay ku salaysan yihiin caqiidada aasaasiga ah ee ah in shakhsiyaadka da' kasta leh iyo asal kasta ay awoodaan inay xalliyaan khilaafaadkooda - si wax ku ool ah, aan qaali ahayn, iyo si nabad ah - iyaga oo ka caawinaya dhexdhexaadiyeyaasha tabaruce ee tababbaran. CRC waxay siisaa bulshooyinka agabka ay ku xalliyaan khilaafaadka si nabad ah oo waxtar leh.
CRC waxay u heellan tahay bixinta adeegyada xallinta khilaafaadka iyo tababarida dhammaan dadka, gaar ahaan kuwa aan awoodin inay iska bixiyaan adeegyada dhaqanka ee ay bixiso maxkamadaha. Waxaan diirada saareynaa u adeegida kuwa aan adeeg dhaqameedku horey ugu shaqeynin sababtoo ah kama aysan hadlin arrimaha hoose ama kuma haboona dhaqan ahaan. Dhexdhexaadinta horay loo isticmaalay habka khilaafku waxa ay ka hortagi kartaa baahida loo qabo faragelin dheeraad ah oo dhanka waaxyaha magaalada, booliiska, ama maxkamadaha - sidaas darteed badbaadinta kheyraadka qiimaha leh iyo dollarka canshuurta.
Hawlgalka: In kor loo qaado xallinta wax-ku-oolka ah ee khilaafka iyadoo loo marayo wada-xiriir furan iyo go'aan-qaadasho la wadaago.
Waxaan aaminsanahay in dadku ay ku xallin karaan khilaafaadka si xushmad leh, dacwad la'aan, si ay ugu wada qanacsan yihiin dhammaan dhinacyada. Waxaan u doodaa in si nabad ah loo maareeyo khilaafaadka iyada oo la adeegsanayo farsamooyinka xallinta dhibaatooyinka kuwaas oo gacan ka geysta dhisidda dareenka bulshada. Waxaan bixinaa adeegga ugu tayada sarreeya ee suurtogalka ah waxaanan hubineynaa in adeegyadan ay heli karaan dhammaan dadka deggan bulshooyinka aan u adeegno. Waxaan iskaashi la samaynaa xubnaha bulshada, kooxaha, dugsiyada, iyo ganacsiyada si aan u horumarino oo aan u ilaalino urur furan oo ka tarjumaya kala duwanaanshaha soona dhaweeya dadka oo dhan. Waxaan kor u qaadeynaa xallinta nabada ee colaadaha sida habka la door bidayo ee lagu dhisayo bulshooyin caafimaad qaba laguna gaaro yoolalka labada dhinac ah.
HawlgalkaSi loo bixiyo adeegyo xalinta khilaafaadka beddelka ah oo la awoodi karo oo la heli karo.
Dhexdhexaadinta & Xallinta Khilaafaadka (MCS) waa Barnaamij Xallinta Khilaafaadka Bulshada oo shahaado haysta sida hoos timaada sharciga Minnesota, sida uu fuliyo Maamulaha Maxkamada Gobolka. Waxaan u shaqaynaa sidii barnaamij aan faa'iido doon ahayn oo hoos yimaada dallada Olmsted Outreach, 501(c)(3) urur samafal. Dadka deggan Rochester iyo koonfur-bari Minnesota waa lagu soo dhawaynayaa inay la xiriiraan xafiiska dhexdhexaadinta iyo arrimaha kale ee xallinta khilaafaadka.
Dhexdhexaadinta iyo Adeegyada Soo celinta
Hawlgalka: Si kor loogu qaado xiriirka ka dhexeeya dadka deggan Degmada Anoka iyadoo la siinayo adeegyo dhexdhexaadin ikhtiyaari ah; in la horumariyo lana baro bulshada Degmada Anoka habab kale oo lagu xaliyo khilaafaadka kuwaas oo dhiirigeliya nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada dhexdeeda; iyo in lagu kabo nidaamka sharciga iyadoo la siinayo hab kale oo lagu xalliyo khilaafaadka.
Ilaa 1987 Adeegyada Dhexdhexaadinta ee Degmada Anoka (MSAC), oo ah 501(c) (3) wakaalad, ayaa caawinaysay qoysaska, xaafadaha, dugsiyada, mulkiilayaasha, kiraystayaasha, ganacsiyada, macaamiisha, maaraynta iyo xalinta khilaafka iyada oo loo marayo waxbarashada iyo adeegyada xallinta khilaafaadka. Dhexdhexaadiyeyaasha iskaa wax u qabso ee xirfad ahaan u tababaran lana kormeero waxay caawiyaan shakhsiyaadka iyo bulshada si ay si guul leh u xalliyaan dhibaatooyinka iyo khilaafaadka iyaga oo isticmaalaya hababka kale ee xallinta khilaafaadka.
Dhaqannada soo celinta iyo dhexdhexaadinta
Hawlgalka: Caawinta Xubnaha Bulshada in ay ka gudbaan khilaafka una gudbaan xalinta waxbarashada, dhexdhexaadinta iyo hababka soo celinta.
Anagoo adeegsanayna waxbarashada bulshada ku saleysan, dhexdhexaadinta iyo hababka soo celinta, waxaan kordhineynaa wacyiga oo aan kor u qaadnaa go'aan qaadashada la wadaago. Barnaamijka Xallinta Khilaafaadka ee Degmada Rice (RCDRP) oo la sameeyay 2001 si ay u bixiso adeegyada xallinta khilaafaadka bulshada iyo maxkamadaha. Intaa waxa dheer, waxaanu ka shaqaynaa dugsiyada, anagoo siinayna tababarada macalimiinta iyo shaqaalaha iyo sidoo kale adeegyo toos ah.
Maaliyadda iyo Tirakoobka
Iskaa wax u qabso oo lala yeesho Ururka Dhexdhexaadinta Bulshada Minnesota waa hab adag oo deeqsinimo ah oo loogu adeego bulshada deegaankaaga. Haddi ay noqoto dhexdhexaadiye iskaa wax u qabso ah, lataliye dhalinyaro, qorsheeye dhacdo, ama kaaliyaha xafiiska, waxaanu ku mahadinaynaa oo aanu ku abaal marinaa wakhtigaaga iyo kartidaada la wadaago fursado macno leh. Si aad fursadan u sii sahamiso, fadlan nala soo xidhiidh ama si toos ah ula xidhiidh mid ka mid ah ururada aan wada shaqaynta leenahay.
Dhexdhexaadinta Bulshada Minnesota waa 501(c)3 urur samafal oo leh guddi maamul oo maamula.
Jeffrey Ringer, La-Madaxweyne
Sharon Press, la-madaxweyne
Beth Bailey ee Dhexdhexaadinta Bulshada & Adeegyada Soo celinta, Khasnajiga
MJ Bauer oo ka tirsan Xarunta Xallinta Khilaafaadka, Xoghaye
Katie Arnold, Barnaamijka Xallinta Khilaafaadka Degmada Rice
Jennifer Blevins, Xarunta Xallinta Khilaafaadka
Ellen Krug, guud ahaan
Mark Labine, guud ahaan
Carol Markham-Cousins, Adeegyada Dhexdhexaadinta ee Degmada Anoka
Wendy Moore, Dhexdhexaadinta iyo Xalinta Khilaafaadka
Alice Silkey, guud ahaan
Dad badan ayaa khilaaf/muran/ khilaaf/ khilaaf kala dhexeeyo dadka kale. Mararka qaarkood khilaafyadaas waxay isu beddelaan dhibaatooyin qoto dheer. Dhexdhexaadinta, waxaanu kula shaqaynayna sidii aanu kaaga caawin lahayn inaad murankaaga u xalliso si hufan oo aad hore ugu socoto. Khilaafku waa adag yahay, dhexdhexaadintu way ku caawin kartaa.
Qaado sahankayaga si aad u ogaatid inaad tahay musharax wanaagsan oo dhexdhexaadinta bulshada ah.
Ogow haddii dhexdhexaadintu kugu habboon tahay >